बारम्बार प्रश्न: अद्यावधिक WordPress हो या हो होइन क्रिएटिव अनलाइन
WordPress 3.6..XNUMX र दुविधा अपडेट गर्दै: हो वा होईन?
हिजो हामीले तपाईंलाई भर्खरको आगमनको बारेमा सूचित गर्‍यौं संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय CMS (सामग्री प्रबन्धक प्रणाली) को नयाँ संस्करणको। र यो महत्वपूर्ण सुधार र एक रमाईलो पूर्वनिर्धारित विषयवस्तुको साथ आउँदछ (अरूको बारेमा फेला पार्नुहोस् WordPress 3.6..XNUMX मा नयाँ के छ).
नवीनता उपन्यास हो, र यदि तपाइँ अप टु डेट हुन चाहानुहुन्छ (र तपाइँ "त्यहाँ नयाँ संस्करण ..." को सन्देश द्वारा चिन्तित हुनुहुन्छ) तपाईं सायद सोच्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईंसँग पहिल्यै छैन भने, अपग्रेड गर्नुहोस् तपाईको संस्करण 3.5.। भर्खरै जारी गरिएको 3.6 मा।
यदि तपाईंले पहिले नै अपडेटको सामना गर्नु भएको छ भने WordPress, हामी यहाँ के भन्न जाँदैछौं तपाईंलाई सायद पहिले नै थाहा छ। हाम्रो निर्देशनहरू ती सबै अवरुद्ध, newbies वा अद्यावधिकहरू डराउनेहरूका लागि लक्षित छन् किनकि उनीहरू आफ्नो वेबसाइट प्रिस्टाइन रहन चाहन्छन्।
अद्यावधिकहरूसँग नडराउनुहोस्: यदि तपाईं आवश्यक सावधानीहरू लिनुहुन्छ भने, उनीहरूलाई समस्या वा टाउको दुखाइको मतलब पर्दैन।
1 WordPress अपडेट गर्नु अघि: ब्याकअप
2 मैले अपडेट गर्नु पर्छ?
3 मैले अद्यावधिक गरेको छु र म दृश्य संपादक देख्न सक्दिन, यसले मद्दत गर्दछ!
WordPress अपडेट गर्नु अघि: ब्याकअप
१. तपाईका सबै फाईलहरूको जगेडा गर्नुहोस्।
तपाईंको प्राथमिकताको नामको साथ तपाईंको कम्प्युटरमा एक फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि वेब प्रतिलिपि,) र तपाईंको FTP प्रोग्राम पहुँच गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईले आफ्नो वेबसाइट (सर्वर, प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड) मा सम्बन्धित डाटा प्रविष्ट गर्नुभयो, जडान गर्नुहोस् र फोल्डर चयन गर्नुहोस् जहाँ तपाइँको वेबसाइट होस्ट गरिएको छ। सामान्यतया, यस फोल्डरमा पब्लिक_एचटीएमएलको नाम छ। यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। नोट: तपाईं यो FTP प्रोग्रामबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ जुन सबै होस्टिंग सेवाहरू सामान्यतया तपाईंलाई उपलब्ध गराउँदछ, सिधा सीपीनेलबाट।
२. तपाईंको डाटाबेसको जगेडा गर्नुहोस्।
तपाइँको होस्टिंग खाता पहुँच गर्नुहोस् र Cpanel मा जानुहोस्। PhpMyAdmin मा जानुहोस् र डाटाबेस चयन गर्नुहोस् जुन तपाईंको वेबसाइटसँग मिल्छ। त्यसपछि निर्यातमा क्लिक गर्नुहोस् र जारी राख्नुहोस्। चलाख!
Your. तपाईको वेबसाइटको सामग्री निर्यात गर्नुहोस्।
सावधानीका रूपमा तपाईको WordPress ड्यासबोर्डमा जानुहोस् (http://yourdomain.com/wp-login.php) र उपकरणहरू> निर्यात सेक्सनमा जानुहोस्, र सबै सामग्रीको प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न विकल्प चयन गर्नुहोस् (पृष्ठ, पोष्ट, कोटीहरू) , ट्यागहरू, टिप्पणीहरू, प्रयोगकर्ताहरू)।
Finally. अन्तमा (र वैकल्पिक): तपाईं सूची लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईले स्थापना गर्नुभएको सबै प्लगइनहरू, विषयवस्तुहरू, प्रयोगकर्ता खाताहरू लेख्न सक्नुहुन्छ ... केहि अपडेटमा अप्ठ्यारो भयो भने तपाईलाई यो जान्नु आवश्यक छ (धेरै असम्भव छ, तर तपाईको पछाडि)।
यी चरणहरू समय-समयमा अपडेट गरिनुपर्दछ, अपडेट गर्नुहोस् वा हुँदैन
मैले अपडेट गर्नु पर्छ?
अद्यावधिकहरू राम्रो छन्- अघिल्लो संस्करण, डिबग कोड, र केही सेवाहरू बाट बगहरू हटाउनुहोस्। तर निश्चित बिन्दुहरू बनाउन आवश्यक छ: तिनीहरू सुरूवात हुँदा तिनीहरू पूर्ण रूपमा तयार हुँदैनन्। यसको मतलब यो हो कि सबै समस्याहरू पहिचान गर्न सकिदैन प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको वेबसाइटहरूमा उनीहरू लागू गर्न र उनीहरूको गुनासो सबमिट गर्नु अघि। तसर्थ, तपाईं जहिले पनि त्रुटिको सानो सीमान्तको बारे सचेत हुनुपर्दछ जुन उनीहरूले बजारमा जाँदा नै काम गर्छन्।
एक नयाँ संस्करण "जानको लागि तयार" हुनु अघि बिभिन्न चरणहरू हुँदै जान्छ। सबै, बिल्कुल सबै वर्डप्रेस अपडेटहरू, अल्फा चरणमा जानुहोस्, त्यसपछि बिटा, र त्यसपछि उम्मेदवार संस्करणहरू।
सबैभन्दा सुरक्षित संस्करण र त्यो कम त्रुटिको साथ आउँदछ अर्को अर्को बाहिर आउन: संस्करण 3.6.1.१
मेरो व्यक्तिगत अनुभव, पछि संस्करण २.०3.6 मा अपडेट गर्नुहोस्, यो खराब भएको छैन। तसर्थ यो मलाई अपडेट गर्न पागल जस्तो देखिदैन।
मैले अद्यावधिक गरेको छु र म दृश्य संपादक देख्न सक्दिन, यसले मद्दत गर्दछ!
यदि यो पछाडि तपाईंको समस्या हो भने तपाईंको WordPress अपडेट गर्नुहोस्, निराश नहुनुहोस्: यो एक सजिलो समाधान छ।
यदि यो तपाईंलाई भएको हो भने, सम्भवतः तपाईंले स्थापना गर्नुभएको प्लगइनले तपाईंको वर्डप्रेसलाई ब्याकफायर गर्दैछ। त्यसोभए तपाईंले के गर्नुपर्छ?
तपाइँको डेस्कटप पहुँच गर्नुहोस् (http://yourdomain.com/wp-login.php) र जानुहोस् प्लगइन्स खण्ड> स्थापित प्लगइनहरू। सबै प्लगइनहरू असक्षम गर्नुहोस्।
अब आफ्नो ब्लॉगमा नयाँ प्रविष्टि सिर्जना गर्न जानुहोस्, र भिजुअल सम्पादक राम्रो देखिन्छ कि भनेर जाँच गर्नुहोस्। यदि हो भने, बधाई! यो पुष्टि हुन्छ कि प्लगइनले तपाईको नाकमा छोईरहेको छ।
अब मेहनती आउँछ। तपाईले आफ्ना सबै प्लगइनहरू एक एक गरेर सक्रिय गर्नुपर्नेछ र कुन एक यस्तो जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई भिजुअल सम्पादक सहि देख्न दिदैन। एकचोटि तपाईंले थाहा पाउनुभयो यो के हो, तपाईंसँग धेरै समाधानहरू छन्:
यसलाई अस्थापना गर्नुहोस्, यसलाई पुन: स्थापना गर्नुहोस् र सक्रिय गर्नुहोस्।
जाँच गर्नुहोस् कि त्यहाँ यस प्लगइनको लागि कुनै अपडेट छैन। यदि यो अवस्थित छ भने, त्यहाँ त्रुटि छ: तपाईंले यसलाई अपडेट गर्नुपर्दछ।
त्यो प्लगइनको साथ प्रबन्ध गर्नुहोस् (यो हुनेछ यदि तपाईं यससँग धेरै रिसाउनुभयो भने: तपाईं यसलाई मेटाउनुहुनेछ, विश्वास गर्नुहोस्)।
यदि तपाईंसँग कुनै अन्य त्रुटि छ भने, तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ मास्टर सूची जहाँ समस्या र समाधानहरू देखा पर्दछ।
थप जानकारी - WordPress 3.6..XNUMX मा नयाँ के छ: नयाँ, पुरानो के हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » WordPress 3.6..XNUMX र दुविधा अपडेट गर्दै: हो वा होईन?
मार्टिन ब्रुनो भन्यो
मैले wp w.3.6 मा अपग्रेड गरेपछि भिजुअल सम्पादकले मेरो २ साइटहरूमा काम गर्न छाड्यो। मैले प्लगइनहरू असक्षम पार्न पहिले नै प्रयास गरें तर यसले काम गर्दैन। कुनै अन्य सुझावहरू?
मार्टिन ब्रुनोलाई जवाफ दिनुहोस्
Pinterest: राम्रो कारण हुन